छि ! मन्त्रीज्यूले खैनी हातमा थुकेर संसदभित्रै फाले | Nepal Newz
Home > नेपाली समाचारहरु > समसामयिक > छि ! मन्त्रीज्यूले खैनी हातमा थुकेर संसदभित्रै फाले
News January 2, 2017 समसामयिक	0
१८ पुस, काठमाडौं । सरकारले पुस १ गतेदेखि गाडीको झ्यालबाट थुक्न नपाइने नियम लगाएको छ । तर, सोमबार व्यवस्थापिका संसदभित्रै शहरी विकास मन्त्रीले हातमा खैनी थुकेर टेवलमुनि फुत्त फालेको दृश्यले नेपालीहरुको ‘सिभिलाइजेन’ को स्तरलाई राम्रैसित उपहास गरेको छ ।
सार्वजनिक स्थलमा धूमपान वर्जित मानिँदै आएको छ । मन्त्रीज्युलाई खैनी च्यापेर संसद् बैठकमा बस्नु सोभनीय होइन भन्ने पक्कै थाहा हुनुपर्ने हो । त्यति पनि थाहा नभए त्यसरी हातमा खैनी थुकेर आफ्नै सीटमुनि फाल्नु मन्त्री त के, कुनै पनि सभ्य मानिसका लागि सुहाउने विषय नै होइन ।
खैनी र सूर्तीमात्रै होइन, सुपाडी, पानपराग, चुइङ्गम लगायतका चिजहरु पनि खाएर जथाभावी थुक्नु असभ्य क्रियाकलाप मानिन्छ ।
Nepal lose to India in SAFF Women’s Championship semifinal
नयाँ वर्षको पिकनिक खान गएका विद्यार्थी सवार बस दुर्घटना, २ को मृत्यु
बस व्यवसायीको सिन्डिकेटले यात्रुलाई सकस